Sadio Mane Ayaa Ka Hadlay Inuu Yahay Qayb Muhiim U Ah Kooxda Liverpool | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Sadio Mane ayaa daaha ka rogay sababta keentay inuu kor kaco booska koowaad ka dib markii uu isku muujiyay inuu yahay qeyb muhiim u ah kooxda sii koreysa ee Liverpool.
Weeraryahanka reer Senegal ayaa ku guuleystay abaalmarinta CAF African Player of the Year bishii hore, isagoo ka caawiyay Reds inay ku guuleysato Champions League bishii June.
36 kulan oo Premier League ah xilli ciyaareedkii hore, Mane wuxuu dhaliyay 24 gool isla markaana bixiyay lix caawin, iyadoo kooxda Jurgen Klopp ay haatan 22 dhibcood oo nadiif ah ku hayaan kooxda ka dib markii ay ku dhameysteen kaalinta labaad ee xilli ciyaareedkii 2018-19.
Mane, oo uga soo dhaqaaqay Anfield kana soo tegey Southampton sanadkii 2016, ayaa cadeeyay taageerada asxaabtiisa iyo qoyskiisa ee ku sugan tuulada Bambali inay fure u yihiin qaabkiisa wanaagsan.
Ma sharaxi karo sida ay yihiin iyo sida ay u dhiiri-galinayaan gaar ahaan. Had iyo jeer waa ay i riixaan, ”Mane, oo mustaqbalkiisa France ka bilaabay Metz ayaa u sheegay bogga rasmiga ah ee Liverpool.
“Haddii aad aragto dadkaas, waxaad ku riixeysaa si adag oo aad u adag inaad ku faani karto sababtoo ah waa qanacsanaanta kaliya ee ay ku qabaan. Waa inaan dib u soo celiyo wixii ay igu sameeyeen.
Waxaan u maleynayaa inay wax gaar ah u aheyd tuulada sababtoo ah tuulada waxaan ku haysanay ciyaartoy waa weyn laakiin waligood kuma guuleysan.
“Markii aan imid Faransiiska oo wakhtigaas aan ciyaarayay horyaal labaad, tuulada waligeed ma lahayn dariiq ay ku daawadaan horyaalnimada labaad sidaa darteed qof walba aad ayuu ugu faraxsanaa inuu marka hore igu arko TV-ga!
Waxay iigu duceeyeen maalin walba inay i arkaan heerkan sababta oo ah way ku faani doonaan Sida arrimuhu u socdaan iyo sida aan u sii dadaalo oo ay u helaan farxad dheeraad ah markay i arkaan aniga oo ka sarreeya, waxaan qabaa inay tahay inaan Naftayda u huray inaan iyaga ku faano. “
Mane ayaan ciyaarin tan iyo markii uu dhaawac muruqa ah soo gaaray qeybtii hore ee Liverpool ay 2-1 kaga badisay Wolves 23kii Jan laakiin waxa uu ku soo laabtay tababarka isbuucaan.
Waa Noocee Qorshaha Cusub Ee Kooxda Real Madrid Ay Ku Soo Shar Tagi Doonto Suuqa Xagaaga Soo Socda?